Sarimihetsika romantika ao amin'ny HBO - Ny lohateny tsara indrindra tokony ho fantatrao momba | Bezzia
Susana godoy | 26/10/2021 14:00 | ankehitriny
Satria raha te handany faran'ny herinandro feno tantaram-pitiavana ianao dia mila andian-tsarimihetsika toy ireny. Satria ny sarimihetsika HBO romantika Talohan'ny safidy tsara izy ireo ary ankehitriny ianao dia hankafy andian-dahatsoratra, izay na dia efa fantatrao aza ny sasany dia azo antoka fa ho tianao ny hamerina.
Satria ny tantara mahafinaritra tsy lany andro ary marina fa rehefa tia azy ireo isika dia mahita azy ireo ad nauseam. Hatramin'ny niverenantsika ho lasa toetra izay mahatonga antsika hahatsapa tena ary afaka manonofy mandra-pifoha. Te hahatsapa izany rehetra izany indray ve ianao?
1 Sarimihetsika romantika ao amin'ny HBO: Before Dawn
2 'Fitiavana sy famindram-po'
3 'Adala, adala, fitiavana'
4 'Zavatra tokony hotsaroana'
5 'Hatramin'izao ka ho mandrakizay'
Sarimihetsika romantika ao amin'ny HBO: Before Dawn
Izy io dia iray amin'ireo sarimihetsika izay tsy dia misy hetsika loatra azontsika lazaina. Toa teti-dratsy somary mitongilana ilay izy, nefa milaza amintsika ny tantaran’ny tovolahy roa nifankahita tamin’ny lamasinina. Avy any Etazonia izy ary nanao dia lavitra taorian'ny fahadisoam-panantenana momba ny fitiavana. Na dia frantsay aza izy miaraka amin'ny fikasihana romantika nefa mbola misy ny fisalasalana. Samy mihaona izy ireo ary lasa mpinamana. Noho ny fahombiazan'ity sarimihetsika ity dia ho tonga tsy ho ela 'Talohan'ny filentehan'ny masoandro' ary farany, 18 taona tatỳ aoriana, dia ho tonga 'alohan'ny misasakalina' izay no ampahany farany amin'ny tantara rehefa samy nanao ny fiainany izy ireo. Efa hitanao ve izany?
'Fitiavana sy famindram-po'
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy lazaina fa sarimihetsika biographie izy io satria miresaka momba ny mpihira ao amin'ny tarika Beach Boys. Ny tantaran'i Brian Wilson Nanova ny tantaran'ny sinema tamin'ny teti-dratsy toy izany koa izy. Nampiakatra be dia be ny fanantenana satria niresaka momba ny fiainan'ny iray amin'ireo mpamoron-kira lehibe izahay. Hitantsika ao amin'ny sarimihetsika ny fomba fialokalofany amin'ny mozika rehefa tsy mandeha tsara ny zava-drehetra, na dia misy foana aza ny fandrika tsy maintsy resena. Mazava ho azy fa ny fitiavana angamba no fandrisihana ilainao.
'Adala, adala, fitiavana'
Eny, azo antoka fa efa nahita an'io ianao fa sarimihetsika romantika hafa an'ny HBO, na dia tsy miankina aza. SATRIA ity tantara ity dia efa manomboka amin'ny mpilalao fototra manana ny fiainan'ny nofinofiny. Satria manambady ny sipany hatrizay hatrizay izy, manan-janaka ary efa 40 taona mahery izao. Ka angamba tsy misy tsy ampy aminy fa ny vadiny. Na iza na iza miloka amin'ny fisaraham-panambadiana sy ny tontolon'ny protagonista dia rava. Mandra-pihaonany amin'ny olona iray ao amin'ny trano fisotroana iray ary manampy azy hiova izy ireo. Na dia manomboka eo aza ny zava-drehetra dia sarotra.
'Zavatra tokony hotsaroana'
Eny, tsaroantsika koa izy io satria anisan’ny nalaza indrindra nandritra ny folo taona. Ankoatra izay, ny mpivady noforonin’ny Tom Hanks sy Meg Ryan Namela sarimihetsika mahafinaritra ho antsika izany ary tantaram-pitiavana avokoa, ka tsy mahagaga raha mahomby foana izy ireo. Izy ireo dia nanao an'io mpivady io izay tiantsika jerena amin'ny efijery, miaraka amin'ny simia sy ny fanoloran-tena tanteraka. Ka amin'ity tranga ity dia tsy hihena izany ary miloka aminy koa izahay. Satria amin'ny alalan'ny radio sy ny feo ihany koa dia afaka mamoha ny fihetseham-po miafina indrindra ary noho izany dia tsy maintsy hankafy indray ity hatsikana romantika ity isika.
'Hatramin'izao ka ho mandrakizay'
Raha heverina ho sarimihetsika ara-tantara sy ara-kolontsaina manan-danja indrindra izy io, dia tsy maintsy ho lasa iray amin'ireo sarimihetsika romantika tsara indrindra ao amin'ny HBO ihany koa. Eny, manana ny taonany izy io, mahazatra izy io fa iray amin'ireo izay tsy leo mihitsy. Anisan'ireo mpilalao azy isika dia mahita an'i Burt Lancaster, Deborah Kerr na Frank Sinatra ankoatra ny hafa. Raha mila fahatsiarovana faran'ny herinandro ianao dia soraty ireo lohateny rehetra ireo satria ho tianao izy ireo, izay tsy isalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Ny sarimihetsika romantika tsara indrindra amin'ny HBO
Torohevitra hanatsarana ny fiaretana ara-batana
Mametraha baiko ao amin'ny efitranonao miaraka amin'ny fanangonana akanjo avy amin'ny Zara Home